INDAWO YEHOLIDE OMNIKELO- Addu Atoll Meedhoo
IHoliday Lodge enomtsalane ikwisiqithi esihle saseMeedhoo Addu City Maldives. Imizuzu nje eli-15 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseGan.
Umtsalane unamagumbi amane ala maxesha edeluxe, aquka isuite yedeluxe, amanzi ashushu nabandayo kwaye onke amagumbi axhotyiswe ngezinto zale mihla kuquka nokufikelela kwi-intanethi yeBroadband Wi-Fi, kwigumbi elikhuselekileyo, iiTV zescreen esicaba ezinetshaneli zesathelayithi zamazwe ngamazwe. Indawo yokutyela yangaphakathi. Umtsalane yeyona ndawo ifanelekileyo yokulala yeendwendwe eAddu City Meedhoo.
Iholide efikelelekayo eMaldives, apho isanti zimhlophe njengoncumo lwabemi, apho iintlanzi zidada ngolonwabo kumanzi afudumeleyo oLwandlekazi lwaseIndiya, apho imozulu iphupha, kwaye imitha yelanga enzulu ilinde ukukugubungela. iingalo.
I-CHARMING HOLIDAY LODGE iyakwamkela kwikhaya leendwendwe elitofo-tofo eMaldives eMeedhoo Island eAddu Atoll, umgama nje weyure ukusuka kwiCapital Male'.
Ukubonelela ngokubaleka okutofotofo kubomi obuxakekileyo obunendawo efanelekileyo yeMaldives Charming Holiday Lodge izisa iindwendwe kwihlabathi elikhethekileyo kunye nomdla.
Esi sakhiwo sifikelelekayo samagumbi ama-4 sime kumganyana nje omfutshane ukusuka kumanzi olwandle acwebileyo acwengileyo kunye neelwandle ezinesanti emhlophe, ezilungele zonke iindawo zokuzonwabisa okanye abahambi beshishini.
IHoliday Lodge enomtsalane ibonelela ngezinto ezahlukeneyo zokuzonwabisa ezifana nemidlalo yasemanzini, ukuntywila kwi-scuba diving, ukuloba, ukuhamba nge-snorkeling kunye nokutsiba-tsiba esiqithini. Kwaye iindwendwe zingonwabela imisebenzi kwindawo yokuphumla ekufutshane eCanareef Resort Maldives. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ineBar, iSpa, iNkundla yeTennis, iGym kunye nezokutyela.
Isiqithi saseMeedhoo sinokuchazwa njengelali yesiqithi apho ulwandle olujikelezileyo luyi-rhapsody eluhlaza okwesibhakabhaka, lubamba enye yeelwandle ezinkulu kwiMaldives. Ukusuka esibhakabhakeni, kubonakala kucocekile kunye nezityalo ezishinyeneyo kunye neendlela ezinde ezithe tye, kunye nomsinga wesilivere weKilhi.
Ifumaneka kwi-73.23°E yobude, kunye ne-0.58°S yobude, yolule malunga ne-10 km ubude ecaleni kongqameko olusempuma lwe-atoll.
Iindwendwe ziya kubonelelwa ngeebhayisekile ezifanelekileyo zokuhamba kwindawo kunye nekhitshi eqhelekileyo yokulungisa ukutya okushushu. Amanye amaziko abandakanya uhambo oluya kufutshane neCanareef Resort Maldives eyimizuzu emi-5 nje yokuqhuba ngemoto kunye nemizuzu eli-15 ngebhayisekile. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide inamachibi ama-2 amakhulu okuqubha, amadama abantwana, iiBar, iindawo zokutyela, ivenkile yekofu, iNkundla yeTennis, iSpa, iGym, iziko lokuntywila, iZiko leMidlalo yaManzi kunye nezolonwabo zasebusuku. Intlawulo yokungena esetyenziswa kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide.
Silungiselela uhambo lwemihla ngemihla oluya kwisiqithi sase-Gan kunye neziqithi ezikufuphi ezihlala abantu ngesikhephe sasekhaya okanye iindwendwe zinokuqesha i-speedboat.
ILoji yeHolide enomtsalane iza kulungiselela uhambo oluya nokubuya ngenqwelomoya ebukekayo ngesicelo esivela kwiSikhululo seenqwelomoya saseMalé ukuya kwiSikhululo seSikhululo saseGan kunye nemizuzu eli-15 yokukhwela isikhephe ngesantya esisuka eGan Airport ukuya eCharming Holiday Lodge. Iinkonzo zenqwelomoya zasekhaya zisebenza yonke imihla ngeshedyuli. Iindwendwe ezifika e-Malé emva kwe-22:30 ziya kufuna ukufumana indawo yokulala kwi-Airport Hotel okanye e-Malé. Baza kutshintshelwa kwi-Charming Holiday Lodge ngosuku olulandelayo ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMalé.
Iintlawulo zokutshintshela aziqukwanga kwireyithi kwaye irhafu engezantsi ibandakanya irhafu.
Umntu omdala (11 nangaphezulu) : USD 249
Umntwana (2-11 iminyaka ubudala) : USD 180
Usana (Ngaphantsi kwe-2): USD 50
Nceda uqaphele ukuba iindwendwe kufuneka zicebise ngokufika kunye neenkcukacha zokuhamba ngendiza ngexesha lokubhukisha, ubuncinane iintsuku ezi-3 ngaphambi kokufika. Zonke iindleko ezongezelelweyo kufuneka zihlawulwe ngokuthe ngqo kwi-Charming Holiday Lodge.
Charming Holiday Lodge ibekwe kwisiXeko saseAddu, eMeedhoo. Udluliselo lubandakanya malunga nemizuzu engama-90 ngenqwelomoya yasekhaya ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iMale’ International Airport ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseGan International, kudityaniswe nemizuzu engama-20 yesantya sephenyane lokutshintshela kwisiqithi esihle apho iCharming Holiday Lodge ikhoyo. I-Meedhoo sesinye sezona ziqithi zikhulu kwiMaldives kunye nesona siqithi sidala sinabantu kwincam esemantla e-Addu City enabemi abangama-2806. Idume ngabaphengululi nabantu abaziingqondi eyivelisileyo.
Umtsalane unamagumbi amane ala maxesha edeluxe, aquka isuite yedeluxe, amanzi ashushu nabandayo kwaye onke amagumbi axhotyiswe ngezinto zale mihla kuquka nokufikelela kwi-intanethi yeBroadband Wi-Fi, kwigumbi elikhuselekileyo, iiTV zescreen esicaba ezinetshaneli zesathelayi…
IsiXeko saseAddu esaziwa ngokuba yiAddu atoll yeyona ndawo isemazantsi eMaldives atoll. Iziqithi zaseAddu Atoll, zodwa kuzo zonke iinkalo. Abantu, ubukhulu beziqithi, inkcubeko kunye nendlela yokuphila zonke zinobunye bazo. IAddu Atoll kunye nesiqithi saseFuahmulaku, esikumgama oyi-30km kumantla eAddu atoll yokwandisa iMaldives ukuya kumazantsi ehemisphere ukunqumla iikhweyitha. I-Addu atoll imalunga neekhilomitha ezingama-478 kumazantsi eNdoda’.
I-atoll imalunga neekhilomitha ezili-18 ububanzi, iikhilomitha ezili-15 ubude kwaye inemilo yentliziyo ekubunjweni kwayo. I-atoll inezinye zezona ziqithi zikhulu zelizwe kwaye inolwakhiwo olumangalisayo lwe-coral reef kwicala elingasentla le-atoll edibanisa ne-house reef yeziqithi kwicala elingasentshona iyenza ibe yeyona ndawo inkulu yolwakhiwo lwe-coral reef elizweni.
Icala lasentshona le-atolls ligubungela ikhonkco leziqithi ezinkulu. Isiqithi saseGan, iFeydhu, iMaradhu Feydhu, iMaradhu kunye neHithadhu ukusuka emazantsi ukuya emantla ngokulandelelana kwaye kwicala elingasempuma kukho iHulhumeedhoo elandelwa ukusuka kwiLuxury Resort Herathera Island, Gesskalhuhera, Mulikolhu, Villingili Shangri La Resort kunye neKandihera. Zonke iziqithi zimi ngokusondeleyo; I-landscape ye-atoll ilawulwa kakhulu yimithi yesundu yekhokhonathi, amatyholo asetropiki kunye nemithi yetropiki.
I-Addu Atoll ikwahlala eyona ndawo inkulu elunxwemeni kwiMaldives enwenwela kubude be-atoll, nangona uphuhliso lwamva nje lwezakhiwo oluyiprojekthi yendlela yeAddu egangathiweyo, kunyanzeleke ukuba kudityaniswe ezinye zemimandla elunxwemeni kwelinye icala leziqithi ezihlala abantu kwisanti entle emhlophe. Iilwandle zisarhangqe inxalenye enkulu yomhlaba we-Addu. Olona lwandle lukhulu lukwiSiqithi saseHulhumeedhoo.
Imozulu e-Addu atoll izuke njengezinye iindawo zeMaldives, ngokungafaniyo nezinye ii-atolls zaseMaldives Addu Atoll inendawo yokubambelela yendalo kwi-atoll basin, njengoko i-atoll ingumhlaba otshixiwe kunye neziqithi ezikhulu ezijikeleze i-atoll, ekhokelela kwizibuko lendalo elinomdla. izolile kwaye ikhuselekile kakhulu kwimikhumbi yolwandle ngamaxesha onke kwaye ayinasiphumo kutshintsho lwamaxesha onyaka. I-atoll ineendlela ezine ezikhokelela ngaphakathi. Emantla yiKuda Kandu kunye neMaa Kandu, emazantsi eGan Kandu, kunye nomzantsi-mpuma weVillingili Kandu ebanzi.
I-Addu Atoll yayisesona siseko somkhosi saseBritane de iMaldives yafumana inkululeko ngo-1965 kwaye emva koko yayinomkhosi owaneleyo de kwangowe-1976, iziqithi zaseAddu Atoll zazilikhaya labo baseBritane basebenza kumkhosi wasebukhosini iminyaka emininzi, nangona bamiswa eGan. IAddu atoll ithathwa njengendawo apho incasa yokuqala yophuhliso yavakala kwiiMaldives. ISiqithi saseGan, nanamhlanje ngokwaso sibonisa uphuhliso, apho luye lwatshintshwa ngokupheleleyo kungekuphela nje kwisiseko somoya, kodwa kunye nazo zonke iziseko ezibonakalayo kunye nezinye izinto eziyimfuneko. Nanamhlanje iSiqithi saseGan sineyona ndawo inomtsalane yeziseko zophuhliso kunye nembonakalo yomhlaba yelizwe enezityalo ezimangalisayo, iintendelezo, amatyholo ashinyeneyo, iigadi zeentyatyambo kunye namasimi engca zonke zinegalelo ekuphefumleni okuhle kwesi siqithi.
I-Addu Atoll sisixeko sesibini esinabemi ngaphandle koMale’. Abantu baseAddu banobuhlobo kakhulu kwaye banomoya wokubuk’ iindwendwe, inkathalo kwaye bayancedana yinxalenye ebalulekileyo yobomi bemihla ngemihla baseAdduan. Abantu baseAddu bathetha ngolwimi olukhethekileyo olulinganiselwe kuphela kwi-atoll kwaye bathathe ibhongo elongezelelweyo eliqhelekileyo le-Adduans kwaye lifumana inkululeko yengqondo kunye nokuzimela kwe-atoll , Uninzi lwabantu luthetha isiNgesi esihle, njengoko babeqeshwe kwi-British yangaphambili. Isiseko seRAF eGan esikwaveze ukuba banamava okusebenza nabantu basentshona. Isiphumo siye sathandeka kakhulu njengoko wonke u-Aadduan enotyekelo lokwamkela abantu basemzini ngamaxesha onke njengoko besazi ukuba basabela njani ngokuzithemba kuzo zonke iimfuno abanokuba nazo. Ikomkhulu leAtoll yiHithadhu enabemi abamalunga ne-15000. Kukho iziqithi ezithandathu zolawulo eAddu Atoll. I-Hithadhu inezikolo eziziisekondari neziphakamileyo, isibhedlele sommandla, iZiko loNxibelelwano loMmandla, indlela ye-asphalt edibanisa esuka eGan-Hithadhu (eyokuqala ngqa eMaldives), indawo yokulungisa iintlanzi, kunye neefektri zempahla kunye nezibuko lommandla (lisakhiwa) ukulungiselela iinqanawa ezihamba elwandle.
Isikhululo seenqwelomoya iGan International sincedwa ziinqwelomoya zemihla ngemihla ezisuka eNdoda’ kwaye yeyona ndlela iphambili yokugcwala kwabakhweli phakathi kweNdoda neAddu Atoll. IiCauseways zakhiwe ezidibanisa iziqithi zaseGan, Feydhu, Maradhu kunye neHithadhu, zenza owona mhlaba mkhulu eMaldives.
I-Addu Atoll Meedhoo ime kwindawo entle yepeninsula emazantsi
kwisiqithi saseMaldives. I-Eco Garden Mathikilhi sisitiya sokuqala somgxobhozo eMaldives kwaye iKoagannu lelona ngcwaba lidala kweli lizwe apho abantu ababalulekileyo baye bangcwatywa khona. I-Tomb Stones kule ngcwaba ibonisa ubugcisa kunye nobuchule babemi bokuqala besi siqithi.
Singaququzelela imisebenzi emininzi yemidlalo yamanzi kwiindawo zokuchithela iiholide ezikufutshane ukuze ube neholide eyoyikekayo!
Kukho iilwandle ezintle ezinesanti emhlophe ezijikeleze iMeedhoo kunye neziqithi ezikufutshane nentlango apho unokuqubha kwichibi elihle le-turquoise kunye nolwandle oluhle lwe-coral olunentaphane yeentlanzi ezimibalabala, izilwanyana zaselwandle kunye neentyatyambo. Iindwendwe zingonwabela iiyure ezingalibalekiyo zokuphumla, ukuqubha, ukuntywila emanzini okanye ukuya kuloba ebusuku kwaye wenze eyakho i-BBQ elunxwemeni kwigadi yangaphandle. Khetha ukuhlala iHoliday Lodge enomtsalane kwiholide yakho yamaphupha eMaldives ukuze ufumane iMaldives yokwenyani eMeedhoo Island eAddu City Maldives.
Kukho iilwandle ezintle ezinesanti emhlophe…